ငါအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်အခါ, ငါ "ငါမပြုမီသင်မြင်ပြီမဟုတ်လော" မှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်ကပြောပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်မျက်မှောက်ငါဖြစ်သကဲ့သို့နေမကောင်းဖြည့်ပါ, သင်သိ, ထို့နောက်ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ကြေးမုံ image ကိုသင်တို့အားယခုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပိုင်နှင့်ပင်၎င်း၏အားနည်းချက်တွေကိုနှင့်အမှားနှင့်အတူမိမိ၏သားသမီးဖြစ်ပျော်ရွှင်ခံစားရ, တူညီတဲ့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
မျှဝေခြင်းခရစ်ယာန်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ သူရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုပေးချင်ချစ်သောသူတော်မူ၏။ ငါသည်သင်တို့ကိုထိုရက်သတ္တပတ်၏မှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်မြင်ကြပြီလျှင်သင်မေးရန်သွားခဲ့သလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျ oh oh ငါNämenဖြစ်လာငါရှိသောကြောင့်အန်ဒီရဲ့မေးလ်များရရှိထား, သို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောအရေးအကြောင်းတွေ, oh oh ငါနေ့တိုင်းဘုရားသခငျသညျငါ့ကိုခစျြ prettier get ဒါအဟောင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုစိတ်ဝင်စားဖို့ညာဘက်ပါသလဲ နီးပါး 15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအဘို့ငါအရက်တစ် relapse နှင့်သောက်သုံးရေတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်လေးယောက်အစောင့်များနှင့်သင်မည်မျှဟုမေးသူနှစ်ဦးရဲများက၏ nerbrottad ဖြစ်လာခဲ့သည်? ကောင်းပြီဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်နေ့တွင်, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနီးပါး4တထောင်နှုန်းထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူကိုဆရာဝန်များသည်နှင့်အညီ, အကြောင်း, ဆိုးဝါးအရက်အဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ခဲ့သောအန်ဒီနှင့်အတူဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဒါကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့!
ငါ inebriated နှင့်အတူပါသောမော်ဂန်မှာအများကြီးrödbetsalladနှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်, ငါ့မိတ်ဆွေတစ်စားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပါတီတစ်ခုအရပျသို့ထွက်သွားခြင်းနှင့်အခြားသောအရပ်၌ငါသည်မည်းနဲ့ကျွန်မလေးအစောင့်များနှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာငါ့ကိုချပြိုင်သူနှစ်ဦးရဲအရာရှိများရှိသည်, ငါပြုသမျှသောအရာကိုတစ်ဦးရုတ်တရက်အားလုံးမှတ်မိနေပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဤမျှလောက်အရက်အတူဒါငါသည်သူတို့မကံမကောင်း beetroot သုပ်နှင့်အတူဆင်း spyde သောဆဲလ်ဖြည့်ဖို့ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။ သူတို့သညျငါ့ကိုအိမ်, nerspydd နှင့်ငါ့လည်ပင်းပတ်လည်ခါးပတ်ကိုပေးပို့မယ်လို့သောအခါငါဒါရှက်နှင့်ခြေအိတ်မပါဘဲ, ငါရဲစခန်းထားခဲ့ပါ။ ဒါဟာအနည်းဆုံး 20 ဒီဂရီဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်အခါ, ငါ "ငါမပြုမီသင်မြင်ပြီမဟုတ်လော" မှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်ကပြောပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်မျက်မှောက်ငါဖြစ်သကဲ့သို့နေမကောင်းဖြည့်ပါ, သင်သိ, ထို့နောက်ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့ကြေးမုံ image ကိုသင်တို့အားယခုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပိုင်နှင့်ပင်၎င်း၏အားနည်းချက်တွေကိုနှင့်အမှားနှင့်အတူမိမိ၏သားသမီးဖြစ်ပျော်ရွှင်ခံစားရ, တူညီတဲ့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းလူတွေကိုဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်! ငါတို့သည်ဘယ်လောက်စကားလုံးများကိုစဉ်းစားပါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းကိုချစ်ဖို့ရှိသည်? ကမ္ဘာ့ဖလားစိုးရိမ်စိတ်ချွတ်ချောက်ချားကကျနော်တို့ယခုမြင်သောအရာကိုထက်ပင်ပိုမိုဆိုးရွားဖြစ်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုအဘယ်သူ၏နှလုံးသားများကိုမီးရှို့နှငျ့ယရှေုခရစျသထင်ဟပ်စေတဲ့ကြေးမုံနေကြသည်ခရစ်ယာန်များသည်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါမှန်ပုံရိပ်ကိုကျွန်မနောက်မှဒါမကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်, မော်ဂန်နဲ့ငါ့ဒါခေါ်ဝစွာလှည့်လည်သာယာသောမဟုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်။ ယခုငါမှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအဲဒီမှာငါချောမောရွေးနှုတ်သော 51 နှစ်က၏လူဟောင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအခြားသူများကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့, ဒါကြောင့်ငါ့အလိုရှိသမျှမေးလ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရောင်ရမ်းခြင်းမှရှိသနည်း ဒါပေမယ့်ဘာပဲဒါယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခစျြ၏သင်နှင့်ငါသည်ဖြစ်ပါတယ်။
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 04:36